novaPDF 7.0 Build 320
ဒါကတော့ Nova Pdf Converter ရဲ့ product များ ဖြစ်ကြတဲ့
novaPDF Professional (Desktop)
novaPDF Standard (Desktop)
novaPDF Lite (Desktop)
novaPDF Professional (Server)
novaPDF Standard (Server)
novaPDF Lite (Server) အားလုံးကို ပေါင်းထည့်ထား ပါတယ် . အထဲမှာ လိုင်စင်အတွက် ပါပြီးသားပါ . နောက်ဆုံးထွက် တဲ့ version ဖြစ်တဲ့အတွက် window7ကို support လုပ်ပါတယ် . သူ့ရဲ့ အားသာချက်ကတော့
(၁) pdf security အတွက် password ဖြင့် အဆိုပါ pdf ဖိုင်အား ပိတ်ထားနိုင်ခြင်း
(၂) တစ်ခြား pdf converter မှာ မပါတဲ့ "http://", "www", "mailto:", "ftp://" or "file://" အစရှိသော Link များအား ကလစ်နှိပ်နိုင်ရင် PDF links အဖြစ် ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် အခြားသော feature များစွာ ပါဝင်ပါတယ် .
အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ် .
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:26 AM